Ikhaya labucala, elihle elinokufikelela ngokulula kwindlela - I-Airbnb
Ikhaya labucala, elihle elinokufikelela ngokulula kwindlela
I-WheelHouse likhaya elihlaziywe kakuhle, elitsha kwaye licoceke kakhulu elibekwe kufutshane neendlela kwaye lingaphantsi kweemayile ukusuka kwizinto eziluncedo edolophini. Ikhaya elilungeleyo, elinenqanaba elinye linekhitshi elikhulu, elivulekileyo, amagumbi okulala abanzi, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo yegesi, igumbi losapho elinescreen esikhulu seTV kunye nesidlali seDVD. Iidekhithi ezimbini zivuleleka kwiyadi enkulu engasemva. Isibane esikhanyayo kwiveranda ikuvumela ukuba ukonwabele iingokuhlwa zaseMinnesota ngaphandle kweengcongconi! Kukho indawo yokupaka igesi, inkundla yebhola yomnyazi kunye nendawo yokucima umlilo esetyenziselwa iindwendwe.
Ubuhle beyadi ye-WheelHouse bunika uxolo noxolo ekupheleni kosuku olunzima. Ikhitshi elikhulu kunye nesiqithi esihle senza ukutya kube lula kwaye yongeza ukuchukumisa ikhaya kwindawo yakho yokuhlala. Perfect iintsapho. Kukho igaraji yemoto emi-2 eqhotyoshelweyo ebonelela ngokhuseleko lwezinto zomntu. Ukuba uzisa isikhephe sakho, kukho indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato ukuze ufikeleleke lula (ufikelelo lukawonke-wonke olukufutshane luseSerpent Lake). Isantya esiphezulu se-intanethi siyafumaneka kwiindwendwe ezijonge indawo entle ekude yokusebenza.
Yonwabela uxolo kunye nokuzola kwi-WheelHouse. Ikhaya lisekupheleni kwe-cul-de-sac kwindawo enemithi. Iinyamakazi zibonwa rhoqo kwiindawo ezinamahlathi kwaye ukanti uya kufumana igrosari, iindawo zokutyela kunye nokuzonwabisa kwimizuzu nje.
Umamkeli wakho uzijongile iimfuno zakho kwaye ukuba kukho imibuzo okanye iinkxalabo ezizayo, nceda ungalibazisi ukuqhakamshelana nam. Siza kuphendula izicelo zakho kwiiyure ezingama-24. Sifuna ukuhlala kwakho e-The WheelHouse kuphumle, kukhumbuleke kwaye kube yindawo onokufuna ukubuyela kuyo.
Umamkeli wakho uzijongile iimfuno zakho kwaye ukuba kukho imibuzo okanye iinkxalabo ezizayo, nceda ungalibazisi ukuqhakamshelana nam. Siza kuphendula izicelo zakho kwiiyure ezingam…